महामारीमा जोखिम मोल्दै, हार्टट्याक बिरामीलाई दोश्रो जीवन दिदै नोबेलका मुटु रोग विशेषज्ञ डा. माधब बिष्ट • Health News Nepal
Dr. Madhab Bista Consultant cardiologist
हृदय घात सुन्ने वित्तिकै नडराउने कमै भेटिएला । यो रोग लाग्दा मुटुको रगतको नली साँगुरिनगई १००% ब्लक हुने गर्छ। त्यति बेला बिरामीलाई एकदमै जोडले छाती दुख्ने गर्दछ। खलखली पसिना आउने हुन्छ। यदि कसैलाई एक्कासी यस्तो खालको समस्या भएमा तुरुन्त नजिकैको अस्पताल लैजानु उत्तम हुन्छ। अस्पतालका डाक्टरहरुले रोगको पहिचान गरि हृदय घात भएको र नभएको पत्ता लगाउछन्। यदि हृदयघात भएको पुष्टि भएमा तुरुन्तै बन्द रगतको नसा खोल्नु पर्दछ।
यस्तो बेलामा कोभिड- १९ पिसिआर रिपोर्टको लागि पर्खिरहने कुरा हुदैँन । समय खेर नफाली तुरुन्तै बन्द रगतको नसा खोल्नु पर्दछ। मुटुको नसा खोलि सकेपछि कोरोन पोजिटिभ देखिन सक्छ । मुटुको बिरामीहरु अरु भन्दा बढी कोरोनाको जोखिममा हुन्छन। त्यहीँ भएर यस्ता बिरामीहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मुटुको बिरामीहरुले कोरोना बाट बच्ने उपाय अन्य साधारण मानिस जस्तै नै हो। त्यसकारण यस्ता डाक्टर बढी जोखिममा हुन्छन।
वास्तवमा हामीले पिपिइको प्रयोग गरेर मात्रै बिरामीको मुटुको उपचार गर्नुपर्ने हो, तर सधैं विविध कारणले गर्दा यो emergency को बेलामा सम्भब नहुन सक्छ , डा. बिष्ट बताउनुहुन्छ ।
Angioplasty सम्बन्धि विश्वकै उत्कृष्ट मुटु अस्पताल सिंगापुर बाट अध्ययन गरि आउनु भएका वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. माधब बिष्टले यस्तो महामारीको बेलामा आफ्नो ज्यानको प्रबाह नगरी हृदय घातका बिरामीहरुको मुटुको बन्द नसा खोल्दै मुटु जोगाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ।
हाल डा. माधब बिष्ट बिराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा मुटु सम्बन्धी विशेषज्ञको सेवा दिँदै आउनु भएको छ।
Tags: Corona Virus #Covid19Dr.Madhav bistaHeart AttackNobel Hospital Biratnagar
Pingback: प्लाज्मा दिन चाहनेको लागि भक्तपुर तरुण दलले गर्यो गुगल फर्मको शुरुवात • Health News Nepal